Kukuvara kwepamuviri: Iyo Yakareba Nzira yekudzosera Yakaitwa Nyore
Most Musipinha kukuvara kunokonzerwa netsaona dzemumugwagwa kana dzevanofamba netsoka, tsaona dzebasa kana dzemitambo uye kunyangwe kuregeredza kwekurapa mune zvimwe zviitiko. Iyo kuipa inobatawo shamwari nemhuri yemurwere.
Hupenyu hahuzove hwakafanana mushure meakakomba Musipinha kuipa uye mhedzisiro yacho ndeyenguva refu. Musipinha kukuvara kunogona kukuvadza huta hunokanganisa kufamba, kunzwa uye nemuviri mashandiro. Uku kukuvara kunowanzoda nguva yehupenyu yekuramba uchirapwa uye kutsigirwa. Gore rega rega muUK vanhu vangangosvika zviuru zviviri vanotambudzika musana kukuvara uko kunotungamira mukuremara zvachose.
Kutsungirira Musipinha kukuvara kunotora nguva, kutsungirira uye kutsungirira. musana kuipa vanorwara vese vanosangana nemugwagwa murefu uye wakaoma kuti vapore. Nzira yekudzoreredza inotanga neyekutanga chirongwa chekurapa uyezve inoenda kune inotsigira kuchengetedza uye kugadzirisa zvimwe kweupenyu hwavo hwese.
Kuchave nematambudziko mazhinji epamoyo, epanyama, epfungwa uye ehurongwa pamberi. Iko kukanganisa kwemari kuchave zvakare kukuru. Kurapa kwenguva refu Musipinha kukuvara kunodhura zvikuru.
Kunze kwemari yekurapa pakutanga senge kurapwa kwekutanga, kurapwa kwekuvhiya, kuchipatara uye nemishonga, unoenderera uye kazhinji usingatarisirwe mutengo senge mari inodiwa pakutenga michina yakakosha senge. mavhiripu kana mutengo wekushandura imba yekugara kuti ive nechokwadi kuti yakanyatsokodzera hwiricheya kuwanikwa. Kuchengetwa kwenguva yakareba kunogona kusanganisira kuchengetwa kwepamusha kwakasarudzika pamwe nemishonga inoenderera uye nekuwedzera kuvhiyiwa.
Maitiro Ekugadzirisa Kusaziva
Paunenge uchiedza kudzoka munzira uye nekuenderera mberi nehupenyu, ungangoda kufunga nezvepamutemo zvekuisa. Vakatambudzwa nemhuri vanofanirwa kuona kuti kufarira kwavo kwachengetedzwa.
Paunenge uchigadzirisa kudonha kwetsaona yakakomba, bata nemagweta ane hunyanzvi munzvimbo ino uye uzive zvavari kutaura nezvazvo. Gweta rakanaka rine ruzivo rwekuita naro Musipinha kuipa vanyajambwa vanogona kuwana rubatsiro rwese rwekurapa uye rwemari varwadziwi vanodzoreredza hupenyu munzira.
Gweta reruzivo rwekushungurudzika rinonzwisisa kuti kupora kunosanganisirawo kurapwa kwepanyama uye kwekushanda pamwe nekupihwa mazano ekutsigirwa pamoyo. Vanogona kuita kuti mugwagwa wako murefu wekudzosa uve nyore.